नाम नभएको मानिस मञ्चित | SouryaOnline
नाम नभएको मानिस मञ्चित
सौर्य अनलाइन २०६९ फागुन २८ गते ०:२४ मा प्रकाशित
काठमाडौं : विजय मल्लको चर्चित मनोवैज्ञानिक नाटक ‘नाम नभएको मानिस’ राजधानीमा मञ्चन भएको छ । नाटयकर्मी कृष्ण शाह यात्रीको परिकल्पना तथा निर्देशनमा यो नाटक मञ्चित भएको हो । नाटकमा मनोरोग–चिकित्सक डा. ज्योतिप्रसादको क्लिनिकको पृष्ठभूमिमा सुनीता र आगन्तुकजस्ता अर्ध–विक्षिप्त पात्रहरूलाई भेला गराएको छ ।
यस नाटकमा मुख्य तीन अनौठा पात्र छन् । पहिलो पात्र ‘नाम नभएको मानिस’ हो जो सधैँ भित्ता र आकाशले किचिएको अनुभव गर्दै भागिरहेको हुन्छ । दोस्रो सुनीता जो सोनाम ग्याल्मो नामक युवकसँगको भावुक प्रेममा फसेर हुन्छिन् र सोनामको आत्महत्यापछि विकृत मनस्थिति लिएर देखापर्छिन् । तेस्रो पात्र ‘आगन्तुक’ हुन्छ, जो टुनामुनामा विश्वास राख्छ र आफ्नो स्वरूप बदल्न सक्ने र संसारका जुनसुकै समस्याको समाधान गर्न सक्ने खुबी आफूमा विकास भएको दाबी गर्छ ।
नाटकमा न्युरोलजिस्ट र साइक्रियाटिस्ट डा. ज्योतिप्रसाद ती पात्रहरूको समस्या पहिचान गर्ने प्रयास गर्छन् । हरेक दृश्य रोमाञ्चक लाग्ने नाटकमा बहुपति प्रथा र आत्माको अस्तित्वलाई पनि सरल तरिकाले दर्साइएको छ ।
नाटकमा नाम नभएको मानिसको भूमिकामा रोहनभक्त श्रेष्ठ, डा. ज्योतिप्रसादको भूमिकामा श्रीतेश भट्टराई, सुनीताको भूमिकामा दीक्षा लिम्बू, आगन्तुकको भूमिकामा अमन पन्त, सोनामको भूमिकामा आशिष श्रेष्ठ र सुलोचनाको भूमिकामा अनुपमा भट्टराईले अभिनय गरेका थिए । ललितपुरको लिटिल एन्जल्स कलेजको प्रेक्षालयमा ‘ए लेभल ग्रुप’मा अध्ययनरत विद्यार्थीको आयोजनामा नाटक मञ्चन गरिएको हो । नाटक देखाउनुपूर्व पात्र तथा चरित्रलाई न्याय गर्न कलाकारलाई दुई महिना पूर्वाभ्यास गराइएको निर्देशक यात्रीले जानकारी गराए । २०५७ सालमा पनि यात्रीले यो नाटक राष्ट्रिय नाचघरमा मञ्चन गराएका थिए । ‘आजका हरेक मानिसमा मानसिक समस्या बढिरहेकाले अहिलेको सन्र्दभमा पनि यो नाटक त्यतिकै सान्दर्भिक भएकाले मञ्चन गरिएको हो,’ निर्देशक यात्रीले भने । विजय मल्लले ३६ वर्षअघि लेखेको यो नाटक रंगमञ्चीय शिल्पका दृष्टिले ज्यादै सशक्त नाटक मानिन्छ । (सौस)